Kumanaan qof ayaa ku xayiran sida Diyaaradaha Ruuxa oo Joojiyay Ku dhawaad ​​300 Duulimaad
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Kumanaan qof ayaa ku xayiran sida Diyaaradaha Ruuxa oo Joojiyay Ku dhawaad ​​300 Duulimaad
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Diyaaradaha American Airlines ayaa sidoo kale baajiyay in ka badan 500 duulimaad iyo 782 kale oo dib loo dhigay sababo la xiriira duufaannada usbuuca iyo “caqabadaha hawlgalka”.
Rakaabkii ku xanibnaa garoomada Fort Lauderdale, Miami, Houston iyo San Juan.
Diyaaradda Spirit Airlines ayaa baajisay 261 duulimaad maanta.
Diyaaradda Spirit Airlines ayaa maanta dib u dhigtay 120 duulimaad.
Kumanaan rakaab ah ayaa maanta ku xayiran garoomada diyaaradaha ee Fort Lauderdale, Miami, Houston, iyo San Juan ee Puerto Rico, kadib Diyaaradda Ruuxas baajiyay ama dib u dhigay ku dhawaad ​​300 duulimaad.
Sida lagu sheegay bayaanka diyaaradda, “taxane cimilo iyo caqabado hawleed” ayaa sababay carqalado socdaal.
Rakaabku waxay soo wariyeen saacadaha sugitaanka safka lacag -celinta iyo caawinta adeegga macmiilka ee garoomada diyaaradaha. Qaar ka mid ah socotada go'doonsan ayaa degey.
Ururka Ka-qeybgalayaasha Duullimaadka-CWA ayaa bayaan soo saaray, iyagoo sheegay in "jadwalka isbeddelka bisha uu dhammaaday," iyo maqnaanshaha IT-ga, oo ay weheliso cimilada, ayaa laga yaabaa inay gacan ka geysteen burburka hawlgalka ee Diyaaradaha Ruuxa.
Gaadiidleyda Mareykanka ayaa ku dhibtooday inay joogteeyaan heerarka shaqaalaha ka dib markii COVID-19 uu yaraaday faa'iidooyinkii.
Florida Air based based Airlines ayaa baajisay 261 duulimaad iyo 120 duulimaad ayaa dib loo dhigay Isniinta ilaa 2:30 pm ET.
Sida muuqata, Shirkadda Diyaaradaha ee Spirit Airlines waxay aad uga fogayd diyaaradda kaliya ee shalay iyo maanta halganka gashay.
American Airlines ayaa sidoo kale baajisay in ka badan 500 duulimaad iyo 782 kale oo dib u dhacay duufaannada usbuuca iyo “caqabadaha hawlgalka”.